Allgedo.com » Ciidamada dowlada oo toogasho ku dilay darawal ka shaqeynayay Muqdisho iyo Marka
Ciidamada dowlada oo toogasho ku dilay darawal ka shaqeynayay Muqdisho iyo Marka
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowlada Soomaaliya ay toogasho ku dileen darawal ka shaqeynayay inta udhaxeysa Muqdisho iyo Marka
Sida ay sheegeen dad kusugan gobolka Sh/Hoose waxaa ay ciidamadan qaarajiyen Mid ka mid ah darawalada gaadiidka ka dhex shaqeeya gobollada Sh/hoose iyo Banaadir ayaa sheegay in ciidamo katirsan Dawlada ay dileen mid ka mid ah darawalada ka shaqeyn jiray halkaasi laguna magacaabi jiray allaha unaxariistee C/shakuur Xashi.
Darawalka la dilay ayaa waxa uu kasoo ambabaxay deegaanka Busleey isagoo kuso jeeday magaalada Muqdisho waxaana uu waday gaari nuuca caasiga loo yaqaano oo khudaarna ay ku rarneyd iyadoona ciidamadu ku dileen deegaanka Mareereey oo 5 km ujira magaalada Afgooye.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa ku waramaya in ciidamada dawlada ay udileen C/shakuur Xaashi markii uu ka dhago adeegay bixinta lacago baad ah oo la weydiiyey taasi oo sababtay in meesha lagu toogto.
Qaar ka mid ah darawalada gaadiidka ku kaxeeya magaalada muqdisho ilaa gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in dhac iyo baarashada ay joogto ka dhigteen ciidamada dawlada inta udhaxeysa Afgooye ilaa marka cadeey waxaana ay sheegeen in mararka qaarkoodna dilal loogeysto.
Allaha unaxariistee C/shakuur Xashi oo ahaa darawal saaka ciidamada Dawlada ku dileen degmada Afgooye ayaa waxay sheegayaan in lagu aasi doono gudaha degmadaasi saacadaha soo socda sida eheladiisa ku warameen.
Ciidamada dowlada ayaa dhibataooyin kuwaan lamid ah ka gaysta qaar kamid ah deegaanada gobolka Sh/Hoose iyadoona ragii falkaas dilka ah gaystay aysan jirin cid kadaba tagtay.